Kanto ankehitriny : notokanana ny mozea lehibe indrindra aty Afrika | NewsMada
Kanto ankehitriny : notokanana ny mozea lehibe indrindra aty Afrika
«Zeitz Museum». Io ny anaran’ilay mozea momba ny kanto ankehitriny aty Afrika, notokanana omaly, atsy Le Cap Afrika Atsimo. Ampirantiana ao ny angon-tahirin’ ilay mpanefoefo, teratany alemà, Jochen Zeitz, mpankafy zavakanto. Izay no nahatonga ny anaran’ity mozea ity hitondra ny anarany ihany koa.
Goavana ny trano misy ity mozea ity. Naharitra efa-taona ny fanamboarana azy ary nahatratra 31 tapitrisa euros ny vola lany tamin’izany. Marihina fa sompitra lehibe, izay efa tsy niasa intsony nanomboka ny taona 2001, ity navadika ho tranombakoka ity.
An’i Jochen Zeitz, mpanan-karena malaza tamin’ny fanorenana ny orinasa Puma, ny tahiry aranty ao amin’ny mozea. Na izany aza, nambarany fa maneho ny harena ananan’ny fireenena afrikanina tsirairay, eo amin’ny tontolon’ny zavakanto ankehitriny, ireo tahiriny ireo. Marihina fa anisan’ireo nanampy tamin’ny fanangonana ireo zavakanto ireo ilay mpanakanto malagasy, Joël Andrianomearisoa.
Any amin’ny toerana fandehanan’ny mpizahatany, tonga atsy Le Cap, no misy ny Zeitz Museum. Izany hoe, kendrena mba handalo ao izy ireo. Na izany aza, fanirian’i Jochen Zeitz ny hitsidihan’ny Afrikanina ity toerana ity. Noho izany, ho maimaimpoana ny fandalovana ao, ho an’ny mpitsidika afrikanina, isaky ny indray mandeha isan-kerinandro.